Motera DC amidy vidiny mora
Karazana DC Motors sy ny fampiharana azy
Karazana DC Motor
Ny moto DC iray dia manana fangatahana be dia be amin'ny sehatry ny injeniera sy ny teknolojia ankehitriny. Avy amin'ny mpanapotika herinaratra mankany amin'ny fiara - misy ny motera DC na aiza na aiza. Mba hiatrehana io fangatahana midadasika io - misy karazana motera DC samihafa arakaraka ny fampitaovana.
Raha misy andiana ratra mampientam-po DC motera na andiana maratra DC maotera dia mikoriana mivezivezy eny an-tsaha ny fivezivezena an-tsokosoko satria mifamatotra amin'ny andiany mihodina amin'ny satroka. Moteur excitation andiany tokana dia motera iray izay efa be mpampiasa. Ny tombony azony dia noho ny hafainganam-pandehany, torela lehibe fanombohana, habe kely, lanja maivana, mora sakanana, ary tady isan-karazany azo ampiharina. Fomba fanitsiana ny hafainganana, tsotra ary mora ampiharina. Amin'ny maotera DC andiany maratra, miovaova ny hafainganana amin'ny enta-mavesatra.
Compound Excitation DC Motera
Ny toetra mampientanentana amin'ny môtô DC dia azo alaina amin'ny fampifangaroana ny toetra mampiavaka ny maotera DC sy ilay maotera DC. Ny fientanam-po an'ny motera DC maratra dia mety misy karazany roa arakaraka ny toetoetran'ny fitambarana, motera DC miangona Cumulative ary moto DC samihafa. Ny motera DC feno fientanam-po dia manana fampiharana azo ampiharina ary matetika ampiasaina ao sambo, trolleybus, ary fampitaovana fitaovana fitrandrahana.
Ny môtô DC Motriany
Ilay môtô mampientanentana manokana fananan'ny môtô DC, izay midika fa ny coil coitation sy ny fanamafisana ny armature ny môtô dia motera mitokana, ary omena misaraka ihany ny fanaingoana, na manao ahoana na manao ahoana ny armature. Ny fantsom-baravarankely sy ny fanamafisam-peo amin'ny sandam-pandehan'ny motera mampientam-po manokana dia avy amin'ny loharanom-pahefana roa. Ny loharanom-pandresena manokana amin'ny motera mampientam-po manokana dia mahatonga ny fitaovana ho sarotra kokoa. Na izany aza, io fitaovam-pitaterana io dia misy fitaterana be dia be ary ampiasaina amin'ny ny milina fitotoana lehibe.
Peratra moto DC
Ny motera DC maharitra maharitra dia azo zaraina amin'ny motera DC tsy misy vy maharitra ary ny motera DC maharitra maharitra sy tsy misy borosy. Ny môtô DC DC maharitra dia ampiasaina betsaka fitaovana elektronika portable na kojakoja, toy ny firaketana an-tsoratra, mpilalao VCD, mpilalao am-peo, mpangalatra herinaratra, ary kilalao maro isan-karazany, ary be mpampiasa koa amin'ny fiara, môtô, dry zareo, bisikilika herinaratra, ary ny bateria Matetika koa ny automatique, an-dranomasina, avana, milina ary indostria hafa. nampiasaina tamin'ny sasany avo lenta avo lenta vokatra, toy ny horonantsary fandraisam-peo, mpanamory, fakan-tsary, telefaona, fitaovana milina fametahana, mpanisa vola ao amin'ny banky, ary milina famonosana banknote.
Jereo ny Tetikasa rehetra
Ekipa mpilalao misy antsika
Ny ekipa fanavaozana ara-teknika tena tsara dia tsy vitan'ny mitondra ny fiainana mankany amin'ny orinasa, fa mampandeha haingana ny indostria sy ny orinasa iray. Ny orinasa dia manana ekipa mpandraharaha izay manam-pahaizana ambony sy manam-pahaizana ambony, nanangona traikefa be dia be, ary nanangana rafitra fitantanana siantifika. Ireo mpikambana ao amin'ny ekipa dia tanora ary feno hery anaty, mavitrika ary be herim-po mba hiatrehana ny fanamby. Amin'ny fahatsapana andraikitra sosialy, te-handray anjara amin'ny fanatsarana ny satan'ny China Electric aho.
Izahay dia orinasa manamboatra vokatra atiny amin'ny Siemens. Niorina tamin'ny 1995 ny orinasa, taorian'ny taona nivoarana, ny orinasa dia nahazo ny fitokisan'ny mpanjifa lehibe maro tamin'ny alàlan'ny vokatra avo lenta sy serivisy tsara. Ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifantsika amin'ny vokatra vokarina dia loharano lehibe indrindra ananantsika, ary ny loharanon'ny mpanjifana raikitra dia mampiseho koa ny maha-azo itokisana ny vokatra azontsika. Nandritra ny taona maro ny fanandramana famokarana dia manome anao vokatra tsara.
Order ny haben'nymirayroaTaratasy teloNy Quantit rehetraazo ekena
Manafaka ny fomba
Manaiky ny habetsahana rehetra izahay, na dia singany iray aza izay halefanay ho anao. Betsaka ny tahiry ananan'ireo marika ireo ao amin'ny trano fanatobiana entana ary ny iray na roa dia tsy olana ho anay. Ny courser, ny habe lehibe kokoa, ny vidiny tsara kokoa. Manoro hevitra izahay mba hanafatra araka izay azo atao.
Ny fandoavam-bola dia mety famindra Telegraphic na Paypal na carte de crédit na koa Alipay. Manana traikefa an-tsokosoko mandritra ny 30 taona mahery amin'ny varotra iraisam-pirenena sy ny fandoavam-bola azontsika ekena isika. Handefa ny kaontinay ianao rehefa hanapa-kevitra ny fomba handoavanao anay.
Ny fomba fandefasana dia amin'ny alàlan'ny rivotra isan-karazany, na amin'ny alàlan'ny rivotra, na amin'ny ranomasina na varavarana isan-trano. Ho an'ny habetsahany kely dia manoro hevitra izahay handefa amin'ny alàlan'ny rivotra na amin'ny alàlan'ny iraka satria tsy mitaky cargos mavesatra kely mihoatra ny 100kg ny mpitondra entana. Ary koa, ny fotoana fitaterana dia miankina amin'ny fomba fidinao ary hanome toro-hevitra anao izahay rehefa manana baiko.
Izahay dia iray amin'ireo masoivohon'ny marika malaza eran'izao tontolo izao any Shina ary manome toky ireo faritra marika rehetra amidinay ireo fa tena izy. Misy kaody QR ao amin'ireo faritra ary izay rehetra azonao zahana amin'ny tranokala ofisialin'ny marika.
Tongasoa eto amin'ny fanontanianay.